Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Ilekọta -> Ezigbo agwa
Ezigbo agwa: [Ilekọta]
Aha gbagwojuru mmadụ anya ka e dekwasịrị ya nꞌegedege ihu. Nke a bụkwa ihe ahụ e dere: “Obodo ukwu ahụ bụ Babilọn nne ndị na-akwa iko na nne ndị nọ nꞌebe nile nꞌụwa na-ekpere arụsị.”
Jisọs zara ya sị, “Mụ onwe m bụ ụzọ, na eziokwu ahụ, na ndụ. O nweghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ bụghị site na m.
“Ugbu a okwu a dịrị ndị nwere amamihe. Isi asaa anụ ọhịa ahụ nwere nọchiri anya otu obodo e wuru nꞌelu ugwu nta asaa ebe nwanyị a bi.
Emesịa, otu nꞌime mmụọ ozi asaa ndị ahụ wụsara ihe dị nꞌefere ha nꞌelu ụwa bịara nꞌebe m nọ bido ịgwa m okwu. Ọ gwara m okwu sị, “Soro m ka anyị gaa, aga m egosi gị ihe ga-abịakwasị nwanyị ahụ ụwa nile maara dị ka akwụla, nwanyị ahụ na-anọkwasị nꞌelu ọtụtụ mmiri nke ụwa.
 “Ọ bụrụ na nwanne gị emehie megide gị, jekwuru ya na nzuzo tụọ ya mmehie ya nꞌihu. Ọ bụrụ na o gee gị ntị, rịọọkwa mgbaghara, i ritela nwanne gị nꞌuru. Ma ọ bụrụ na o geghị gị ntị, kpọrọ otu onye ma ọ bụ mmadụ abụọ ọzọ laghachi azụ nꞌebe ọ nọ, meekwa ka ihe nile i kwuru nꞌihu ndị akaebe a doo ya anya. Ọ bụrụkwa na ọ nọgidesie ike jụ ige gị ntị, were ikpe gị jekwuru ndị chọọchị. Ọ bụrụ na ọ nabataghị ikpe ndị chọọchị kpere, gụọ ya dị ka onye mba ọzọ, onye na-amaghại Chineke. Nꞌezie, asị m unu, na ihe ọ bụla unu kere agbụ nꞌụwa, e keela ya rị agbụ nꞌeluigwe. Ihe ọ bụla kwa unu tọpụrụ, a tọpụkwala ya rị nꞌeluigwe.
 Chineke emeela ka ihe nile dị nꞌokpuru ike Kraịst, meekwa ya ka ọ bụrụ onyeisi ihe nile nke nzukọ ya bụ chọọchị. Nꞌihi na chọọchị bụ anụ ahụ Kraịst. Ọ bụkwa ihe na-emezu Kraịst onye ya onwe ya bụ mmezu ihe nile nꞌebe nile.
Onye ọ bụla jụrụ m, jụkwa ozi m, nwere onye na-ekpe ya ikpe. Okwu nile m kwuru ka a ga-eji kpee ya ikpe.
Unu nụrụ na m gwara unu okwu sị, ‘Aga m ahapụ unu, emesịa aga m alaghachikwute unu.’ Ọ bụrụ na unu hụrụ m nꞌanya unu gaara aṅụrị ọṅụ. Nꞌihi na m na-alakwuru Nna m. Nna m dịkwa ukwuu karịa m.
“Amaara m ụzọ nile i si taa ahụhụ nꞌihi Onyenwe anyị. Ọzọ kwa, amaara m ihe banyere ndọgbu i na-adọgbu onwe gị nꞌọrụ, na ọnọdụ ogbenye gị. Ma nꞌezie, i nwere akụ dị ukwuu nꞌeluigwe. Amaara m ihe banyere nkwutọ nile ndị na-emegide gị na-ekwutọ gị, nkwutọ nke ndị ahụ kpọrọ onwe ha ndị Juu, na ụmụ Chineke, ndị na-abụghị ụmụ Chineke, kama ha bụ ndị na-akwagide ọrụ ekwensu.
Kama nanị otu ihe ha rịọrọ anyị, bụ ka anyị cheta inyere ndị ogbenye aka. Nke a bụkwa ihe m na-achọsi ike inyere ha aka.